HomeWararka DenmarkToogashooyinka Sweden oo u gudbay Denmark 17 Sano jir lagu toogtay Copenhagen
December 5, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Subaxnimadii jimcaha ayaa wiil 17 jir ah oo Iswidhish ah lagu toogtay goob timaha lagu qurxiyo oo ku taal duleedka Copenhagen.
Ehelada wiilka waa la ogeysiiyay, sida ay booliisku sheegeen Sabtidii. Ma aysan sheegin in 17-jirkan uu degenaa Denmark iyo in uu booqasho ku yimid dalka.
Ilaa hadda ma jirto cid loo soo qabtay kiiskan. Laba qof ayaa soo galay goobta timaha lagu qurxiyo ee Rødovre waxayna ku dhufteen dhowr xabadood – wiil 15 jir ah iyo nin 28 jir ah ayaa ku dhaawacmay toogashada.
Goobjooge ayaa sheegay in ragga dilka geystay ay wajiyada soo duubteen. Bilaysku ilaa hadda ma xaqiijin mana beenin in kiisku la xidhiidho dambiyada kooxaha gaangiska ah.